तर्क शास्त्र – Page2– आफ्नै भोगाई आफ्नै तर्क…
पत्रकारिता कि पर्चाकारिता ?
September 29, 2016 October 3, 2016 Deep Jyoti Leaveacomment
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको एउटा संवैधानिक अंग हो । संवैधानिक अंगको आफ्नै एउटा मर्यादा हुन्छ । जब कुनै पनि संवैधानिक अंगले आफ्नो मर्यादा नाघेर काम गर्दछ तब उसको गरिमामा ठेस पुग्न कुनै बेर लाग्दैन । संवैधानिक निकाय भएको नाताले अख्तियारले जारी गर्ने कुनै पनि डकुमेन्टहरुको महत्व निकै ठूलो हुन्छ र यसको एउटा गल्तीले पनि जनमानसमा नराम्रो संदेश जान सक्छ भन्नेमा यो सदैव सचेत रहनुपर्छ ।
सामान्यतया अनलाइनमा प्रेस विज्ञप्ति राख्नुको उद्देश्य धेरैभन्दा धेरै माझ सूचना प्रवाह गर्नु हो । तर यदि एकै विषयका त्यही सूचनालाई भिन्दा भिन्दै तरिकाले राखिन्छ भने त्यसको अर्थ के हुनसक्छ ? कुरा हो अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सोसल साइन्स वहा:को ‘अनियमितताको नाममा’ आफ्नो वेबसाइट र फेसबुक पेजमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको । Continue reading →
नाकाबन्दीको वार्षिकीमा सिक्नुपर्ने पाठ
September 21, 2016 October 3, 2016 Deep Jyoti Leaveacomment
पोहोर साल यतिबेला देश चरम अभावको रापमा पिल्सिरहेको थियो । भारतको नाकाबन्दीले जनजीवन एकदमै कष्टकर बन्दै थियो । नागरिकको भान्सामा खाना पकाउने ग्यास थिएन, त्यसको विकल्पको मट्टीतेल, दाउराको पनि अभाव, आवतजावत गर्नुपर्यो सवारीसाधनमा पेट्रोल/डिजेल थिएन, नाकाबाट सामान आउन नसकेर बजार भाउ छोईसक्नु थिएन । मौसम त चाडबाडको थियो चारैतिर तर अभावले मानिसहरुमा कुनै उत्साह थिएन, उमँग थिएन, हर्ष थिएन । बाध्यताको चाडबाड भयो सबै समुदायको लागि २०७२ । के दशैं, के दिपावली, के छठ, के ईद सबै चाडपर्व राजनीतिले छिट्टै गति लिओस् भन्दै बित्यो सम्भवतः हरेक जातजाती, समुदायको लागि ।
एक प्रकारको पीडा थियो सबैमा अभावको । अनि राजनीतिक आक्रोस पनि त्यस्तै थियो चाहे त्यो मधेशलाई काठमाडौंको सरकारसँग या काठमाडौंलाई मधेश केन्द्रित दलसँग । कारण फरक फरक भएता पनि सायद पीडा उस्तै थियो सबैतिरका नागरिकमा । कतै भूकम्पले टुक्रिएको मनमा अभावको दर्द थियो भने कतै बन्द र अभावको त्रासमा जनजीवन दिनानुदिन त्रसित हुँदैथियो । यसो हुँदा कष्टपूर्ण जनजीवनले पक्कै पनि एकअर्कामा दोषारोपण गर्नु स्वभाविकै हो तर राजनीति गर्नेहरुले भने वाहियात कारणहरु देखाएर नागरिकहरुमा विभाजन र वैमनस्यता सिर्जना गर्न खोज्नु कत्तिको जायज थियो त्यो हामीले सोच्नैपर्छ । Continue reading →
सवारीले अड्काएको मेरो सवारी !
September 20, 2016 October 3, 2016 Deep Jyoti Leaveacomment
आज त टाईममै अफिस पुग्छु भनेर ८ बजे हतार हतार पाकेको खाना पनि छाडेर हान्निए माइक्रो स्टेसनतिर । मनमैजुमा अफिस टाईम ठ्याक्क सुरुहुनुभन्दा अलिक अगाडि निस्कियो भने माइक्रो चढ्न लाईन बस्नुपर्दैन । त्यही भएर म अक्सर घरबाट अरुभन्दा छिटो निस्किन्छु, आज त तुलनात्मक रुपमा अझ चाडैं निस्किएँ । बिहानै त ट्राफिक जाम नहोला करिब आधा घण्टामा सुन्धारा पुग्छु अनि कात्यानीको टेम्पोले अलिक टाइम लगाउछ यता उता गरेर जसरी नि ९:१५ सम्ममा त अफिस पुग्छु भन्ने समयको क्यालकुलेसन मनमा गर्दै सदाझैं फुरुक्क परेर गाडीमा चढें ।
गाडीमा अक्सर बोर लाग्ने भएर म प्राय: किताब पढ्छु किनकि त्यतिबेला दैनिक तालिकामा अलिकति फ्री पाउँछु आफूले आफैलाई । आज भने हिजो अफिसमा हालेको ‘लोकमतको खोजी’ पढ्नु मन लाग्यो । हाम्रो तिरको माइक्रो उही त हो जति छिटो चढे पनि सार्वजनिक बिदाको दिन चढे पनि खचाखच हुनु स्वाभाविक हो । फरक यति मात्र हो कि तपाईंले सीट पाउनुभयो कि उभिन पर्यो । म भने सिट पाउने भाग्यमानीहरुमै पर्छु किनकि म स्टेसनबाटै चढछु ।
आज भने म महिला सिटको रिजर्भेसनको उपयोग गर्दै महिला सिटमा बसेर लोकतन्त्रको मजा लिदै किताबतिर ध्यान लाउदै आएँ । लोकतन्त्रका ठूलाठूला व्याख्याहरुमा रमाउदै थिएँ गाडी लैनचौरमा टक्क अडियो । चारैतिरबाट कोभन्दा को अगाडी पुग्ने मेसोमा छरिएका अव्यवस्थित गाडी र तीनको हर्नहरुले त्यो एरिया शान्ति दिवसको दिन पनि कोलाहलमय थियो । मैले किताबबाट आँखा हटाएँ र गाडीको झ्यालबाट बाहिर चिहाएँ । सडक भद्रगोल रहेछ यत्रतत्र छरिएका स्कुलका गाडी, एम्बुलेन्स, सार्वजनिक सवारीसाधन, प्राईभेट सवारीसाधनहरु ।
मोबाइलमा टाईम हेरें भर्खर ८:२० भएको रहेछ । माइक्रोबाट गन्तव्य समयमा पुग्न नपाउनुका विवश आवाजहरु ओइरिए ‘एका बिहानै हैन के को जाम हो यो ?’ ड्राइभरले व्यंग्यात्मक पाराले प्रतिउत्तर दिए ‘सवारी छ रे !’
फेरि एकजना बुज्रुक प्यासेन्जरले अर्को व्यंग्य हाने ‘अब सवारी भन्ने होइन । को गयो को आयो भन्नुपर्छ । सवारीलाई त हामीले रानीवनमा उहिल्यै थन्क्याईसकेको होइन !’ माइक्रोमा एकछिन सबैको हाँसो फैलियो ।
कुन्नि कसको पट्यारलाग्दो सवारीको पर्खाईमा एकछिन भनेपनि पोलिटिकल प्रहसन राम्रैसँग जम्यो गाडीमा । म भने आफ्नो हातमा रहेको किताबको लोकतान्त्रिक व्याख्या र दैनिक जीवनमा आफूले भोग्नु परेको लोकतन्त्रको देनलाई मनमनै विश्लेषण गरें र मुस्कुराएँ । जसले जतिसुकै तर्क वितर्क गरे पनि आखिर त्यों १५ मिनेटको प्रहसनमा भनिएझैं ‘तन्त्र जे जे आएपनि हामी नागरिकमाथि शाशन गर्ने तरिका फेरिएको छैन’ भन्ने कुरामा म पनि नजानिदो पाराले सहमत भएँ । किनकि यो यदाकदा १-२ दिनको सास्ती होइन नागरिकले भोग्नुपरेको । हरेक दिनजसो उही कहानी- बिहान जाँदा बेलुका फर्कदा । उसैनी काठमाडौं ट्राफिक जामबाट कहिल्यै मुक्त हुनसकेको शहर होइन त्यसमाथि दैनिकको यो सास्ती । हजारौं मानिसको दिनको उर्जानै आधि घटाउछ केहि मान्छेहरुको विलासीताको यो लतले | तर साँचीनै सोच्ने हो भने नेपाली राजनीति जहिले यसरी कमेडी र प्रहसनमै मात्र सिमित हो त ? नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन, नागरिकको सुविधाको बारेमा काम गर्नको लागि त हामीले ती बुज्रुक प्यासेन्जरले भनेझैं सवारीलाई रानीबनमा थन्क्याएका थियौं सायद तर पनि अवस्था उही नकाब मात्र फरक भयो भने आखिर आम मान्छेले के पायो त यी परिवर्तनहरुबाट | सुनेको थिएँ अन्य देशहरुमा त यस्तो हुँदैन अरे तर हम्रोमा आखिर किन डराउछन् होला ? ‘नबिराउनु, नडराउनु’ भनेझैं राम्रो काम गर्नु शानले हिड्नु नि !
अचम्म लाग्छ सवारी पनि कति गर्छन् मेट्रो ट्राफिकले भन्ने गरेका यी अति विशिष्ट व्यक्तिहरुले । हिजो बेलुका घर फर्कदा पनि सवारी भन्दै थियो आज बिहानै पनि सवारी रे ! काममा समयमै जान पाईदैन, साँझ घरमा जहिले किचकिच ढिलो भएकोमा । यिनीहरुको सवारीको चापमा सधैं हाम्रो भने समय बर्बाद हुने भो भनेर फेरि मैले नबुझेको लोकतन्त्रलाई बुझ्न किताबतिरै आँखा लगाएँ । आखिरमा जे जे तन्त्र भनिएपनि त्यसका अर्थ र व्याख्या किताबकै ठेलीमा मात्र त भेटिने रहेछ हामी आम मान्छेले | यथार्थमा त शाशन प्रणाली उही त रहेछ नि आखिर !